Alatsinainy 21 Febroary 2022
Portable Mpandahateny Seda dia fitaovana ampiasain'ny teknolojia fanamafisana. Mpanome habaka eo afovoany ny mpikarakara habaka. Ary koa, ny endri-javatra nomerika toa ny port USB sy Bluetooth Connection dia mahatonga azy io ho toy ny mpilalao portable ary mpandahateny miaraka amin'ny faritra an-tokantrano mampiasa adaption. Jiro maivony nalaina amina vatana ivelany dia miasa ho jiro latabatra. Ary koa, ny endrika manintona amin'ny haingo dia mahatonga azy io ho fanasana an-trano dia azo ampiasaina amin'ny famolavolana anatiny. Ny fampiasana ihany koa ny habaka amin'ny fomba tsara kokoa dia iray amin'ireo singa manan-danja amin'ny Seda.
Alahady 20 Febroary 2022
Asabotsy 19 Febroary 2022
Ny Tranonkala Nampiasa fomba minimalist ny famolavolana mba tsy hampihoatra ny zavatra niainan'ny mpampiasa azy amin'ny fampahalalana tsy ilaina. Tena sarotra ny mampiasa fomba minimalist amin'ny indostrian'ny dia satria mifanandrify amin'ny endrika tsotra sy mazava, ny mpampiasa dia tsy maintsy mahazo fampahalalana feno momba ny diany ary tsy mora ny mifangaro izany.
Ny Kaopy Kafe Sy Ny Saosy
Zoma 18 Febroary 2022
Ny Kaopy Kafe Sy Ny Saosy Ny serivisy zava-pisotro mamy miloko amin'ny ilan'ny kafe dia tafiditra ao anatin'ny kolontsaina maro samihafa satria fanaon'ny olona ny manisy kafe misy tiana mahafinaritra an'i Tiorkia, biscotti any Italia, churros any Espaina ary daty any Arabia. Saingy, amin'ny saosy mahazatra dia mitsabo mankany anaty kafe mafana izy ireo ary mametaka na mando avy amin'ny tsotroina kafe. Mba hisorohana izany dia ity kaopy kafe ity dia misy saosy miaraka amin'ny goto natokana hitahiry ny fitsaboana ny kafe amin'ny toerana. Satria ny kafe dia iray amin'ireo zava-pisotro mafana mafana, ny fanatsarana ny kalitaon'ny zava-pisotro kafe dia misy lanjany amin'ny fiainana andavanandro.
Ny Marika Sy Ny Fonosana
Alakamisy 17 Febroary 2022
Ny Marika Sy Ny Fonosana Vahaolana ara-pifandraisana amin'i Leman Jewelry ny maha-izy azy vaovao dia rafitra vaovao iray hamoahana ny fahatsaran-tarehy, mahafinaritra nefa malefaka ary kely fatratra. Ny marika vaovaom-panahy nomen'ny alàlan'ny Leman miasa, ny serivisiny amin'ny endriny haute couture, amin'ny famoronana endri-bazaha diamondra rehetra manodidina ny marika kintana iray na marika fofonaina, mamorona famantarana mahaliana ary koa manala ny vokatr'ilay diamondra. Taorian'izay dia namboarina miaraka amin'ny antsipiriany ambony kalitao ny fitaovana mifangaro rehetra mba hanasongadinana sy hanomezana fahafaham-po ny singa vaovao hita maso marika rehetra.
Alarobia 16 Febroary 2022
Ny Fampirantiana Ny zavakanto dia mitaona ny fiainana sy ny fiainana mitondra fisaintsainana lalina sy fandikana ny zavakanto. Ny elanelan'ny zava-kanto eo amin'ny zavakanto sy ny fiainana dia mety ho an'ny commute isan'andro. Raha mihinana tsara ny sakafo rehetra ianao, dia afaka mamindra ny fiainanao ho zavakanto. Ny famoronana endrika kosa no zavakanto, izay vokarina amin'ny sainy manokana. Fitaovana ny teknika, ary valiny ny fanehoana azy. Amin'ny eritreritra ihany no hisy ny asa tsara.
Smartstreets-Smartbin™ Sigara / Gum Bin Alahady 3 Jolay
Shayton Equilibrium Hypercar Asabotsy 2 Jolay
SATA | BIA - Blue Islands Açor Ny Maha-Marika Ny Marika Zoma 1 Jolay
Portable Mpandahateny Ny Birao Ny Tranonkala Ny Kaopy Kafe Sy Ny Saosy Ny Marika Sy Ny Fonosana Ny Fampirantiana